Uyangabazisa uCaster ofuna igolide eLondon | IOL Isolezwe
Uyangabazisa uCaster ofuna igolide eLondon
Isolezwe / 27 July 2012, 1:25pm /
UMGIJIMI uCaster Semenya uzohola iqembu lakuleli emcimbini wokuvula ngokusemthethweni amaLondon Olympic Games namuhla ebusuku. Eyegolide elibhekwe kuCaster iyangabazisa ngenxa yefomu yakhe yakamuva
UCASTER Semenya (21) uya emidlalweni yama-Olympics efana nencwadi evaliwe yize engomunye wabalindeleke ukuthi batholele elakuleli indondo kule midlalo evulwa ngokuse-mthethweni namuhla emcimbini ozoqala ngo-9.30 ebusuku, e-Olympic Park Stadium, eLondon.
Kusukela abuya nesiliva kuma-World Championship eDaegu nyakenye, uSemenya uhlulekile wukukhuphula igiya nokushiya imibuzo ngokuthi uzokwazi yini ukuthola indondo njengoba kulindelekile kuma-Olympics.
Ngempelasonto edlule kuSamsung Diamond League eMonaco, ube ngowesibili uma kusukwa ekugcineni eqopha u-2:01:6 kwawina umgijimi waseRussia u-Elena Kofanova ngo-1:58:41.
Isikhathi esingcono esenziwe nguSemenya kule sizini ngu-1:59:18 awuqopha eGermany ngoJulayi ezibekisela indawo eLondon.
Kungenzeka ukuthi indlela enza ngayo yingoba engafuni ukuziveza zonke izinduku zakhe noma kuwumqansa ukuthola umgqigqo.
Kunzima ukuthola okuyikhona kuSemenya. Akatholakali ukuthi azikhulumele ngaphandle uma kunemidlalo.
Kungenzeka ukuthi lokhu kungenxa yokuthi akasabathembi abezindaba ngemuva kokuthi igama lakhe bekunqakiswana ngalo eyohlolwa ubulili kulandela ukudla umhlanganiso kuma-World Championship ngo-2009.
Noma ngabe yiliphi iqiniso kodwa uma kuthathwa akusho ephephandabeni laseLondon ngemuva kokuwina eGermany ngoJulayi, wukuthi wonke amalungiselelo akhe abebheke kuma-Olympics
“Inhloso wukuwina kuma-Olympics,” washo kanje.
“Kumele ngiwine igolide, yilona engilifunayo. Ukugijima kuma-Olympics kuyigxathu elikhulu wonke umuntu ufuna ukunqoba khona. Ngizizwa ngikhululekile ngoba ngenza izikhathi ezingcono. Ngijabule,” kuqhuba uSemenya.
Kodwa kusukela akhuluma kanje izikhathi zakhe azigculisi uma ziqhathaniswa nezezimbangi zakhe, uPamela Jelimo waseKenya obekwe endaweni yokuqala emhlabeni ngenxa yesikhathi sakhe asenze kule sizini okungu-1:56:76. UMariya Savinova waseRussia owahlula uSemenya eDaegu wenze isingu-1:57:42.
Ithemba wukuthi ngemuva kokuthi uSemenya ehole iqembu lakuleli emcimbini wokuvula azobe ephephezelisa kuwona ifulegi lakuleli, uzobona ukuthi sesifikile isikhathi akade asilinda avezele umhlaba nalabo abamngabazayo ukuthi usangakuphinda akwenza enqoba eBerlin ngo-2009.
“UCaster udinga ukuphekwa kancane manje ukuze abe ngumgijimi ophelele. Ngifuna ukusebenzisa wonke amava enginawo ukumsiza aqonde ukuthi kunjani ukuhlala esicongweni,” kusho umqeqeshi wakhe uMaria Mutola.
UMutola ukholwa wukuthi uSemenya angaliphula irekhodi lika-800m eselineminyaka engu-30 elaqoshwa nguJarmila Kratochvilova lika-1:53:28.